गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » पितृहरु सपना देख्नुको अर्थ के हो ? गरुड पुराणमा लुकेको रहस्य बुझ्नुहोस्
हिन्दू धर्ममा यस्तो विश्वास छ कि श्राद पक्षमा हाम्रा पितृहरु हामीलाई आशीर्वाद दिन को लागि पृथ्वीमा अवतरण हुन्छन् ।
धेरै मानिसहरुलाई उनीहरुका पुर्खाहरुको आसपास को भावना पनि छ। जबकि केहि मानिसहरुका पुर्खाहरु सपनामा आउँछन्।
यस पटक पितृ पक्ष २० सेप्टेम्बर देखि ६ अक्टोबरसम्म चल्ने छ। हामी तपाइँलाई बताउँछौं कि यो सपना मा पुर्खाहरुलाई देख्नुको अर्थ के हो ?
पण्डिहरुको विश्वास छ कि पुर्खाहरु श्राद पक्षमा दान र सद्गुणसँग खुसी भए पछि उनीहरुलाई सपनामा आशीर्वाद दिन आउँछन्। उनीहरुको आगमन एउटा संकेत हो कि उसले तपाइँको श्राद्ध स्वीकार गरेको छ। सपनामा पुर्खाहरु तपाईंलाई समृद्धि र सफलताको आशीर्वाद दिन आउनुभएको हो ।
प्राय मानिसहरुको सपनामा पितृहरु आउँछन् र पुर्खाहरु केहि माग्दै गरेको देखिन्छन्। यदि उनीहरुको खुट्टामा जुत्ता वा चप्पल छैन वा उनीहरु भोकै छन्, तब उनीहरु तपाइँलाई केहि संकेत दिइरहेका छन्। पंडितहरुका अनुसार पुर्खाहरुले मागेको कुरा पूर्ण भक्तिसँग दान गर्नु पर्छ।
गरुड पुराण के भन्छ ?
यो गरुड पुराणमा भनिएको छ कि एक मृत परिवार को सदस्य जिवित परिवारको सपनामा आउनुको मतलब हो कि उनको आत्मा अझै भड्किरहेको छ। आत्माको शान्तिका लागि घरमा रामायण वा गीता पढ्नुहोस्। यसो गरेर तपाइँका पुर्खाहरुको आत्मा शान्ति प्राप्त हुनेछ।
धेरै मानिसहरुको सपनामा उनीहरुका पुर्खाहरु सधैं घर को नजिकै देखा पर्छन्। यो एक संकेत हुन सक्छ कि परिवारका लागि उनको आकर्षण समाप्त भएको छैन। पण्डितहरुका अनुसार यस्तो अनुभूति भएकोले गाईलाई दैनिक रोटी खुवाउनु पर्छ। अमावस्याका दिन भोग चढाउनु पर्छ। यस कारण पुर्खाहरुको आशीर्वाद रहन्छ।
उनीहरुले पुर्खाहरुलाई पनि संकेत गर्दछन्
पितृ पक्षमा पुर्खाहरु पृथ्वीमा आउँछन् र परिवारलाई देखेर खुशी हुन्छन् । उनीहरुलाई आशीर्वाद दिएर जान्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। यदि एक परिवारका सदस्यको मृत्यु सपनामा देखिन्छ । तब यो विश्वास छ कि तपाइँ आउने समयमा केहि राम्रो समाचार सुन्न पाउन सक्नुहुन्छ।